Raha araka ny loharanom-baovao azo avy any Antsirabe dia namono tena ity renim-pianakaviana ity noho ny antony tsy fantatra. Mba tsy hampijaly ilay menaky ny ainy vavikely manodidina ny 5 taona izay voalaza fa hany zanany anefa dia nobabeny ity farany ary nafatony lamba niaraka taminy mba tsy ho afa-mihetsika. Toy ny nitsoraka avy hatrany tao anaty rano izy mianaka raha ny fahitana azy tamin’ny sary ka ireo mpitsangatsangana teny an-toerana no nahita voalohany ny razana izay marihina fa tsy nilentika ka nampandre avy hatrany ny mpitandro ny filaminana. Mponina tsy lavitra ity kaominina Tritriva ity ihany izy mianaka ireto, hoy ny vaovao saingy tsy voafaritra tsara kosa ny toeram-ponenany sy ny antony tena nanosika ilay reny handao ny tany amin’ny andro fety tahaka izao. Manodidina ny 40 taona moa Ratompokovavy ary raha ny tombana sy ny resak’ireo mpanara-baovao dia mety ho olana ara-pitiavana na vokatry ny tsy fisiana no nanosika azy hamono tena niaraka tamin-janany tahaka izao. Ny mpandinika ny sary sy nanaraka ity vaovao ity niparitaka tamin’ny tambajotran-tserasera kosa dia nanamafy fa tsy azo heverina ho famonoan-tena no nataon’ity ramatoa ity noho izy mbola nitazona entana teny an-tanany. Ny fanadihadian’ny mpitandro ny filaminana no hamoaka ny tena marina.